Izixhobo - Shenzhen Yrsooprisa Pro Beauty Co., ltd
Ukhetho lwezixhobo zeBristle
* Yokwenziwa/ Inayiloni (Simahla yasimahla / ngeVegan)
Iibristle ezenziwe ngabantu, zihlala zivela kwinylon okanye ezinye iintsinga zokwenziwa. Ngokungafaniyo neebrashi zendalo, iibrashi zokwenza izinto azinayo i-cuticle, ebenza ukuba bayisebenzise kakuhle kunye neemveliso ezingamanzi okanye zekrimu, ezinje ngesiseko kunye nokufihla, kuba ngekhe babambe izithambiso.
Iibristles zokwenza izinto zihlala zithambekele komnye nomnye, zizenza ukuba zilungele ukusetyenziswa ngokuchanekileyo. Kwaye iibrashi zokwenziwa akufuneki zibangele iingxaki xa unengxaki yokungezwani komzimba, amabala okanye uvakalelo (okoko nje uzigcina zicocekile kunjalo).
* Iinwele zeNdalo
Ukuziqhelanisa kwenza ugqibelele ngebrashi yendalo, njengoko yomelele kakhulu kwaye iba ngcono kokukhona uyisebenzisa. Xa kuziwa kwiimveliso zepowder, iibrashi zokuhombisa zendalo zezona zikhethiweyo. Basebenza ngokumangalisayo ngayo nayiphi na ipowder ukusuka kwi-bronzers ukuya kwi-eyeshadows, nayo yonke into ephakathi, njengoko zilayishwe ngohlobo ukuze ufumane usetyenziso olungcono.
Izinwele zendalo zihamba ngokukhululekileyo, zikuvumela ukuba ungathathi kuphela imveliso eyaneleyo kuswayipha enye, kodwa uphinde uyidibanise kakuhle.
* Ifreyim yeAluminiyam
IAluminiyam ferrules zezona zinto zixhaphakileyo zibonwa, kwaye ezona zinto ziphambili zichonga umgangatho wazo yitekhnoloji yokulungisa kunye nobukhulu.
Ngokobungakanani beferrule, sihlala siyisebenzisa i-aluminium ferrule enobunzima be-0.3-0.5 mm. Emva kweenkqubo ezininzi kunye novavanyo olungqongqo, ziyavunyelwa ukuba zisetyenziswe.
* Ifrule yobhedu
Xa kuthelekiswa nee-aluminium ferrules, ii-ferrules zethusi zinokukhanya okungcono kunye nobunzima, kodwa zibiza kakhulu.
Zisetyenziselwa ubunewunewu kunye nebrashi yobuchwephesha yobungcali.
* Iplastiki ifrule
I-Makeup Brush Handle apho i-logo yakho ye-brand kunye nolunye ulwazi olufana nenjongo okanye ubungakanani lunokuprintwa.
Sinezinto ezininzi zokubumba zabucala esitokisini sokhetho lwakho.
Ulwenziwo nayo yamkelwe.
* Umthi/ IBAMBOO
Izibambo zomthi zezona zinto zisetyenziselwa ukuphatha izinto. Iintlobo eziphambili zeenkuni zibandakanya i-birch, bamboo, kunye nothuthu. Unokwenza ngokwezifiso izibambo zebrashi kwizinto eziphathekayo kunye nemibala.
Sivame ukusebenzisa izinto zealuminium kwiziphatho zesinyithi, ukuqhubekeka ngokulula, kunye nokuhombisa
* IPlastiki / iAcrylic
Ihlala isetyenziswa kwezinye iimilo ezizodwa, izibambo ze-acrylic zezona zibalaseleyo.